कुवेतमा भूकम्प : परिवार भन्दा टाढा भएका बेला मरिने हो कि भन्ने लाग्यो
Tue, Mar 20, 2018 | 13:41:04 NST
12:07 PM (4 months ago)
डिबी भुसाल/स्याङ्जा, हाल कुवेत ।
आइतबार मेरो साप्ताहिक बिदा थियो । त्यसैले म कोठामै थिएँ । साँझ परेपछि साथीहरु क्यारेमबोर्ड खेल्न बाहिर निस्किए । कपडामा आइरन गर्नुपर्ने भएकाले म चाहिँ कोठामै बसें ।
आइरन लगाइसकेपछि साथीहरु आउनुभन्दा अघि नै खाना बनाउँछु भनेर खाना बसाएर मासु काट्दै थिएँ । मासु काट्न सुरु गरेको मात्रै थिएँ रिंगटा लागे जस्तो भयो । सुरुमा त के भएको हो भन्ने मैले ठम्याउनै सकिन ।
तर हातमा भएको चक्कु खसेपछि म आत्तिएँ । पाँच तलामा भएकाले मज्जैले हल्लिएको थियो । यसो माथि हेरेको त बल्बहरु पनि हल्लिँदै रहेछन् । त्यसपछि मात्रै मैले भूकम्प आएछ भन्ने ठम्याएँ ।
किचनमा भएकाले सुरुमा अर्को कोठामा भएका पर्स, मोवाइल लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर कोठातिर जानै लाग्दा हामी बस्ने बिल्डिङकै माथिल्लो तलामा बस्नेहरु आत्तिएर भाग्दै गरेको देखेपछि मलाई पनि के को पर्स, के को मोवाइल भन्ने लाग्यो । अनि म पनि भागें ।
आत्तिएका बेला कोही पनि लिफ्टतिर गएनन् । सबै सिँढीबाटै भागे । सिँढीबाट ओर्लिएर भाग्दै गर्दा त नेपालको जतिको भुकम्प आयो भने त त्यो भन्दा धेरै क्षति हुन्छ जस्तो लाग्यो । किनकि सबै ठूल्ठूला भवन । त्यसमाथि भाग्नलाई खुल्ला ठाउँ पनि थिएन् ।
त्यसैले अब परिवारबाट टाढा भएका बेला विदेशमै मरिने पो हो कि भन्ने पनि सोचें । तर धन्न त्यस्तो भएन । केहीबेरमा इराक र इरानमा भुकम्प गएको थाहा पाएपछि कुवेतमा आएको त्यसको धक्का रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
त्यसपछि अलिक ढुक्क भयो । त्यो थाहा पाएपछि बाहिर निस्किएकाहरु पनि केहीबेर बसेर कोठामा फर्किए । आज त यहाँको अवस्था सामान्य छ ।
(कुवेतको फर्वानियामा रहेका भुसालसँग मोहन पौडेलले गरेको कुरामा आधारित)
​विदेशको कमाईले आमाका गरगहना फिर्ता गरेँ
​मलेसियाले खुट्टा खायो, मैले क्षतिपूर्ति पाउँछु होला त ?
युद्धमा होमिएका सेनालाई खाना सप्लाई गर्ने काम गरें
​हिसाब राख्न थालेपछि घरमा झगडा हुन छाड्यो
समाचार प्रभाव : पत्रकार त्रिलोचनले ठगेको पैसा फिर्ता गर्ने लिखित सम्झौता गरे कोइरालाले आफूले असुलेको रकम तीन महिनासम्ममा फिर्ता गर्ने गरी दुई जना साक्षी सहित हस्तलिखित सम्झौता गरेका छन । त्यसका लागि उनले दुईवटा फरक फरक मितिको चेक समेत बुझाएको म्यानपावर सञ्चालक राईले बताउनुभयो ।
मलेसियाको सडकमा बेवारिस भेटिएका रामबहादुरको परिवार भेटिएन उनलाई नेपाल फर्काउन पहल गरिरहेका छन् । तर घर ठेगाना पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनी कम्पनीको नाम र आफ्नो पासपोर्टको विवरण समेत बताउन सक्दैनन् । उनको साथमा परिचय खुल्ने कागजात पनि छैन ।
​पत्रकार महासंघ युएई शाखाका पूर्व अध्यक्ष कोइरालाले नक्कली कामदार मागपत्र बनाएर ठगेको खुलासा उज्यालो अनलाइनसँग कुरागर्दै कोइरालाले भने ‘काम गर्ने क्रममा गल्ती भयो, दुईदिनमा हिसाब क्लियर गर्छु समाचार नलेखिदिनुहोला ।’ कोइरालाले पैसा फिर्ता गर्छु भनेको दुई दिन वितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि पैसा फिर्ता गरेका छैनन ।
भोग्नेको नजरबाट विदेशमा ब्युटिपार्लरको काम (भिडियो) अहिले परिवारको बुझाइ फेरिएको छ । ‘काम हेरेर अनि काम गर्ने ठाउँ हेरेर हुन्छ राम्रो नराम्रो पनि’ निरु थप्नुहुन्छ ‘अनि बिग्रिने नबिग्रिने आफैंमा पनि भर पर्छ ।’महिलाहरु असुरक्षित हुन्छन भन्ने चिन्ता पनि त हो नै हैन र ? प्रश्न सुनेपछि निरुले आफैंले काम गर्ने ठाउँको उदाहरण दिनुभयो ।
युवा पलायन रोक्न रोल्पाका स्थानीय सरकारले थाले अभियान
रोल्पा, चैत ६ – युवालाई गाउँघरमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ जिल्लाको एक स्थानीय निकायले युवा लक्षित स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याएको छ ।
समाचार प्रभाव : मलेसियामा बेवारिस भेटिएका रामबहादुरको परिवार पत्ता लाग्यो
काठमाडौं, चैत ६ – मलेसियाको सडकबाट उद्धार गरिएका रामबहादुर बिकको परिवार सम्पर्कमा आएका छन् ।
सोमबारको तुलनामा रियाल, रिंगिट, दिर्हामको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, चैत ६ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ७३ पैसा र विक्रिदर २७ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ ।
मृत्युदण्ड सुनाइएका उमेश भन्छन् : ‘घर आउँछु आमा ब्लडमनिका लागि ७० लाख चाहियो’
धनुषा, चैत ६ – बाह्र वर्षदेखि सउदीको कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका धनुषाका उमेश यादव आफ्नो आमालाई कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा गर्दा भन्छन्, “म छिट्टै घर आउँछु आमा, छिट्टै आउँछु ।” १०–१५ सेकेण्डभन्दा बढी कुरा हुन्न फोनमा ।
देश परदेश अंक २९९
कार्यक्रम देश परदेशको अंक २९९ मलेसिया तथा युएई जानुअघि, त्यहाँ रहँदा र नेपाल फर्कंदा ध्यान दिनुपर्ने...
देश परदेश अंक २९८
​देश परदेश अंक २९७
विदेशबाट ल्याइएको शव काठमाडौंबाट गाउँ लैजान कहाँ सम्पर्क गर्ने? इन्फोग्राफ​ ः उज्यालो।